यस्तो अफर : ‘मलाई गर्भवती बनाऊ र पाँच सय युरो लैजाऊ’ ! « गोर्खाली खबर डटकम
बेलायती अखबार द मिररमा छापिएको समचारअनुसार एडेलिनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो विज्ञापन पोस्ट गरेकी छन्, ‘केटाहरुभेट्नु त ठूलो कुरा होइन् । तर, म सम्बन्धमा बसेर समय बर्बाद गर्न चाहन्नँ । बरु म त्यसका लागि पैसा तिर्छु’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ! यस्तो अनौठो गाउँ छ, जहाँ मानिसहरु मात्र होइन पशुपंक्षी समेत अन्धा हुन्छन्